Change or Die – Live the Dream
သင်ဟာ သင့်ဘဝမှာ သင်မနှစ်သက်တဲ့ အရာတခုကို ကြိတ်မှိတ်သည်းခံပြီး လုပ်နေရပြီလား? ?
သင်တကယ်လိုချင်တဲ့အရာမဟုတ်တာတွေကို အဆင်ပြေအောင် ကြိုးစားရင် နှစ်သက်ချင်ယောင်ဆောင်နေရပြီလား.? ?
ဒီလိုဆိုရင်တော့ သင်ဟာ တစ်ခုခု ပြောင်းလဲဖို့ လိုနေပါပြီ ⚠️
ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ကျွန်တော် တို့ဘဝတွေဟာ တိုလွန်းပါတယ်….
ကိုယ်နဲ့တကယ်မကိုက်ညီတဲ့အရာတွေကို သည်းခံအောင့်အီးပြီး လုပ်ဖို့ အချိန်မရှိပါဘူး….
ကိုယ့်အတွက် တကယ်ပျော်ရွှင်စေတဲ့ အလုပ် ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံ ကိုယ့်ရဲ့ တကယ့်ဝါသနာ စတာတွေအတွက် အချိန်အများကြီးပေးသင့်ပါတယ်..
ပြောင်းလဲမှုလုပ်တယ်ဆိုတာ အပြောလေးနဲ့ပဲ ပြောင်းနေလို့ မရပါဘူး
ဒီတပါတ်မှာတော့ ကျွန်တော်တို့က Resistance to change ဆိုတဲ့ လူတွေ ဘာကြောင့်ပြောင်းလဲရမှာ ကြောက်နေတာလည်းဆိုတာ ပြောပြသွားပါ့မယ်…တစ်ပုံချင်း ထောက်ပြီးဖတ်သွားပေးပါ။ အကျိုးရှိတယ် ဆိုရင် Like and Share သွားဖို့လည်း မမေ့နဲ့နော်
လူတွေဟာ change or die ဆိုရင် change ကို ရွေးမယ်ထင်ရပေမယ့် တကယ့်လက်တွေ့မှာတော့ die ကို ရွေးမိသွားတာများပါတယ်
ဒါကြောင့်မို့ လူငယ်တွေအနေနဲ့ မိမိဘဝမှာ ဘာတွေပြောင်းလဲဖို့ လိုနေပြီလည်းဆိုတာ သေချာစဉ်းစားပြီး ပြောင်းလဲ နိုင်အောင် ကြိုးစားသင့်ပါတယ်
တချို့အပြောင်းအလဲ တွေဟာ ဘဝနဲ့ရင်းရပါတယ် သေချာစဉ်းစားရပါတယ် ပြောင်းလဲဖို့ အချိန်ယူရပါတယ်..
ဒါပေမယ့် လူတွေတော်တော်များများဟာ ပြောင်းလဲဖို့ တွန့်ဆုတ်ကြတယ် ကြောက်ရွံံကြတယ် …
လူတွေဘာကြောင့် အပြောင်းအလဲ ပြုလုပ်ဖို့ တွန့်ဆုတ် ကြောက်ရွံံကြတာလည်းဆိုတာသိသွားရင် ကျွန်တော်တို့ဟာ အပြောင်းအလဲတွေကို ပိုပြီး လွယ်လွယ်ကူကူ မှန်မှန်ကန်ကန် လုပ်ဆောင်နိုင်ကြပါလိမ့်မယ်….
21 ရာစုမှာ လူငယ်တွေဟာ အရာရာကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း စူးစမ်းလေ့လာကြတယ်။
နယ်ပယ်တော်တော်များများမှာ ပါဝင်ကြတယ် ပညာရပ်တော်တော်များများကိုလည်း လေ့လာကြတယ် ဒါပေမယ့် သူတို့တကယ်နှံ့နှံ့စပ်စပ် ကျွမ်းကျင်တဲ့ အရာပြပါဆိုရင် သေချာမသိတော့ဘူး
ဟိုနေရာစပ်စပ် ဒီနေရာစပ်စပ်လောက်ပဲ သိတာများပါတယ်..
ကျွန်တော်ဆိုလည်း ပုံဆွဲတာလည်း နည်းနည်းရတယ် စာအသင်အပြလည်း နည်းနည်းကောင်းတယ် IT ဘက်လည်း စိတ်ဝင်စားတယ် NGO တွေမှာလည်းအလုပ်လုပ်ချင်တယ်
လုပ်ချင်တာတွေများပေမယ့် ကိုယ်တကယ် သိတာဘာရှိလည်းဆိုတော့ မရေမရာပါပဲ..
ဒါကြောင့် ဒီနေ့ကစပြီး ကိုယ်တကယ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ပညာရပ်တစ်ခု အလုပ်တစ်ခု ကိုရွေးပြီး သေချာကျွမ်းကျင်အောင် လေ့လာသင်ယူပါ ပြီးရင် ပြောင်းလဲမှုကို စလိုက်ပါ
မသိတာကို ကြောက်ခြင်း(fear of unknown)ဆိုတာ တကယ်ဖြစ်မလာသေးတဲ့အရာတွေကို ကြောက်နေတာ
ကိုယ်ပြောင်းလဲမှုလုပ်လိုက်ရင် အောင်မြင်ပါ့မလား ပူပန်နေတာ။
မျောက်သစ်ကိုင်းလွတ်သလို ဖြစ်မှာကို တွေးပြီး ကြောက်နေတာ
ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေ ရဲ့ ဝေဖန်ပြစ်တင်သံတွေကို ခံယူဖို့ သတ္တိမရှိသေးတာ
အဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့က ကိုယ်တကယ်စိတ်ပါဝင်စားပြီး နှစ်သက်တဲ့ အရာတစ်ခုတွေ့ပြီဆိုရင် unknown ဖြစ်နေတာတွေကို ကြောက်မနေဘဲနှင့် risk ယူပြီး change ရဲရပါမယ်
Self-confidenceနည်းသွားရင် အရာရာကို ကြောက်ရွံ့နေပါလိမ့်မယ်….
တချို့အခွင့်အရေးတွေဟာ ကိုယ်နဲ့ထိုက်တန်ပေမယ့် ကိုယ့်ရဲ့ self-confidence နည်းမှုကြောင့် လက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတာတွေကြုံဖူးကျပါလိမ့်မယ်..
ဥပမာ- အတန်းထဲမှာ ဆရာမက ကျောင်းသားတွေအားလုံးကို တခုခုမေးတယ်ဆိုပါဆို့ ကိုယ်က သိသော်လည်း self -confidence နည်းလို့ ထမပြောရဲတာ ဝင်မဆွေးနွေးရဲတာ ဖြစ်နေတုန်း ကိုယ်လောက်မသိပေမယ့် self-confidence မြင့်တဲ့ သူငယ်ချင်းက ထပြီးဆွေးနွေးတာတွေ ခဏခဏ ကြုံဖူးကြမှာပါ ဒီထက်ကြီးမားတဲ့ အခွင့်အရေးတွေကိုလည်း ဆုံးရှုံးဖူးကြမှာပါ
အပြောင်းအလဲတွေလုပ်တဲ့အခါမှာလည်း မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်ခြင်းက အရေးကြီးပါတယ်..
သင်ကတောင် သင့်ကိုသင် မယုံရင် ဘယ်သူက သင့်ကို ယုံတော့မှာလည်း
ဒီနေ့ကစပြီး မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု အပြည့်နှင့် ပြောင်းလဲမှုတွေစတင်ပါ….
ဘယ်သူမှသင့်ထက် ပိုမတော်ပါဘူး နည်းနည်းလေး ပိုပြီးစောရောက်နေတာပဲရှိတာပါ ပြန်ပြီးအမှီလိုက်နိုင်ပါတယ်
Self-cofidence ဘယ်လိုမြင့်အောင်လုပ်ရမလည်းဆိုတဲ့အချက်တွေကို အရင် post တစ်ခုတင်ထားပါတယ် အောက်က link မှာ ဖတ်ကြည့်ပါ..https://goo.gl/wZ1oLX
၂၁ ရာစုမှာ အယူသီးနေလို့ မရတော့ပါဘူး
ရှေးလူကြီးတွေ မိဘတွေ ဆရာသမားတွေရဲ့ ဆိုဆုံးမတာတွေကို ပြင်သင့်တာကို ပြင်ယူ
တချို့ဟာတွေဆိုရင် နားထောင်ပြီး မေ့ပစ်လိုက်ပါ
ကိုယ်နဲ့သင့်တော်တဲ့ ခေတ်ကာလနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ဆုံးမစကားတွေကိုသာ လက္ခံပါ
ကိုယ့်ကို ချုပ်ကိုင်ထားတဲ့အတွေးအခေါ်အယူအဆတွေကို မေ့ပစ်လိုက်ပါ
စပြီးသာပြောင်းလိုက်ပါ …..အခက်အခဲတွေလည်း ပျော်ပျော်ကြီးသာ ရင်ဆိုင်လိုက်ပါ
ရာထူး ၊ ငွေ ၊ ဂုဏ်မက်ခြင်း
သင်ဟာ ဆရာဝန်တယောက်ဆိုပါစို့ ဒါပေမယ့် ဆေးကုဖို့က သင့်ရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်ဘူး လူနာတွေနဲ့မပျော်ဘူး
ဒါပေမယ့် သင်ဟာ ဆရာဝန်ပဲ ဆက်လုပ်နေတာဟာ သင့်ရဲ့ status ပျောက်သွားမှာစိုးတာပါ တနည်းပြောရရင်
ဘဝခဏလေးအတွင်းမှာ ရာထူးတွေ ဂုဏ်တွေဆိုတာ ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး စိတ်အပင်ပန်းခံ စိတ်ညစ်ခံပြီး ဒီရာထူးတွေကို မက်မနေသင့်ပါဘူး
ကိုယ်ရဲ့ တကယ့်အစစ်အမှန်ကို ရှာဖွေပြီး ပြောင်းလဲလိုက်ပါ
Confort Zone ထဲကထွက်ပါ
Start coming out of the comfort zone if u want to make changes.
Change လုပ်မယ်ဆိုမှတော့ လက်ရှိနေရာကနေ အသစ်စရတာ ဖြစ်နိုင်တယ် ဒါမှမဟုတ် နယ်ပယ်ပြောင်းလိုက်တာဖြစ်နိုင်တယ် အဲ့တော့ အခက်အခဲတွေတွေ့မယ် စိန်ခေါ်မှုတွေရှိမယ်
လက်ရှိနေရာလောက် ဇိမ်ရှိရှိနေရဖို့ အခွင့်အရေးနည်းကောင်းနည်းမယ်
ဒါပေမယ့် ကိုယ်မှ တကယ်ပြောင်းလဲတော့မယ်ဆိုရင်တော့
စိန်ခေါ်မှုတွေ အခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်ရတာ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ.ပျော်စရာ ကောင်းမှာပါ….
အပြောင်းအလဲ တစ်ခုမလုပ်ခင် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့တိုင်ပင်ဖူးလား?
တိုင်ပင်ပြီးရင် စဉ်းစားထားတဲ့အတိုင်း ပြောင်းဖြစ်လား?
တော်တော်များများကတော့ ကိုယ်စဉ်းစားထားတာတွေ ပြောင်းသွားတာများပါတယ်
ပြောင်းလဲလိုက်ကာမှ သူငယ်ချင်းတွေနှင့် အဆင်မပြေတော့မှာ သူငယ်ချင်းတွေက ကိုယ့်ကို တမျိုးထင်မှာ
ဥပမာ- ရည်းစားမရခင် ကတိတမျိုး ရပြီးတမျိုး စသည်အားဖြင့် ကိုယ့်ပြောင်းလဲမှု အပြစ်မြင်တာ.
အပြောင်းအလဲ မလုပ်ခင် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့တိုင်ပင်သင့်ပါတယ် ဒါပေမယ့် သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ အတွေးတွေက ကိုယ့်ကို မလွှမ်းမိုးပါစေနှင့် သူပေးတဲ့အကြံကို နားထောင်ပါ စဉ်းစားပါ ပြီးမှ ဆုံးဖြတ်ပါ အရမ်းကြီး အလွှမ်းမိုးမခံပါနှင့်
ဒီအချက်တွေမှာ ကိုယ်နဲ့ကိုက်နေတာ ဘယ်အချက်တွေဖြစ်နေလည်း
ကိုယ့်ပြောင်းလဲမှုကို ဘယ်အရာတွေက ပိတ်ပင်ထားတာလဲဆိုတာ အဖြေသိပြီလား
ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ အမြန်ဆုံး အပြောင်းအလဲတွေ ဖန်တီးဖို့အတွက်
Tips for first impression
Google နဲ့ English
ဆောင်းပါး နှင့် သတင်းများ, ဆောင်းပါးများ, ပညာရေး
Soft skills ကောင်းအာင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ
ပျင်းရင်စာဖတ်တယ် နှင့် အောင်မြင်သွားသောလူငယ်များအကြောင်း – ၄
ဆောင်းပါး နှင့် သတင်းများ, ဆောင်းပါးများ, ပညာရေး, ဘဝ